September | 2016 | Indrenionline.com | Page 30
Monthly Archives: ४ आश्विन २०७३, मंगलवार ११:३४
बेडमुनि बच्चा सुताएर बेडमाथि यौनधन्दा
त्यो ‘घरवाली’ले ‘आमा’ शब्द उच्चारण गरिन्, मलाई सहन झन गाह्रो भयो । मैले आँखा बन्द गरेर आक्रोशको आवेगलाई रोक्ने कोशिस गरें, तर सकिँन । रिसमा आँखा पनि मैले देखिनँ । के के गरें गरें रु मेरो त्यस्तो व्यवहार थेग्न नसकेर उनीहरुले हतार हतार मलाई ढोका भित्र छिराए र चाबी लगाए । जानेबेलामा ‘घरवाली’ले भनी ‘जबसम्म तैँले धन्दा गर्दिनस्, तबसम्म तैँले ...
यातायात व्यावसायीको आन्तरिक द्धन्द्धका कारण बर्दियामा यातायात ठप्प
कुशुम वि.क./ बर्दिया असोज ४ गते । दुइ बटा यातायात व्यवसायि सघको विवादका कारण बर्दियाका नागरिकलाइ सास्ति भएको छ । असोज १ गते देखि बर्दियामा भेरि यातायात प्रालिले लामो दुरिका गाडि सचालन गरेकै दिन कृष्णसार यातायात व्यवसायीका केहि कर्मचारीले बर्दियाको मैनापोखरमा भेरि यातायातका एसी सस्पेन्सन गाडिहरु ना ६ ख ७८९२, ना ६ ख ८४३९ नम्वरका वसको सीमामा तोडफोड भएको भेरि यातायात ...
चर्चा पाउन पुनमको हट भिडियो
असोज । मोडल नायक नायिका कोलाइ नहोलार आफू कसरी चर्चामा आउने भन्ने विचार । त्यैक्रमा उनीहरुले आ–आफ्नै भिन्न भिन्न कलाहरु प्रस्तुत गर्ने गर्दछन् । यो पटक मोडल तथा नायिका पुनम पाण्डेयले पनि आफू कसरी चर्चामा आउन सकिन्छ भनेर एउटा उपाया झिकेकिछिन् । लामो समयदेखि चर्चा विहिन बनेकी मोडल तथा नायिका पूनम पाण्डेय एक भिडियोका कारण चर्चामा आएकी छिन । पाण्डेय ...
सरसफाइमा जनतादेखि सेना प्रहरीसम्म
इन्द्रेणी संवाददाता तुलसीपुर, ४ असोज । तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघ र तुलसीपुर नगरपालिकाको मुख्य आयोजना तथा विभिन्न सामाजिक संघसंस्था, विभिन्न टोल विकास समिति र सुरक्षा निकायको सहकार्यमा शुरु भएको क्लीन तुलसीपुर ग्रीन तुलसीपुर अभियानमा पांँचौं साता प्रवेश गरेको छ । अभियानले तुलसीपुरको मुहार फेरीन थालेको छ । अभियानको पांचौ हप्ताकोअवसरमा आज वाहिनी चोक हुँदै (क) लाइृन हँुंदै गुम्राहा चोक राप्ती ...
बम पड्काउनेलाई कारवाही नगरे आन्दोलन गर्ने हिसान, प्याब्सन र एन प्याब्सनको चेतावनी
दाङ, ४ असोज । विद्यालय क्षेत्रमा बम आतंक फैलाइएको भन्दै घट्नामा संलग्नहरुलाई तत्काल कडा भन्दा कडा कारवाही नगरिए संयुक्त रुपमा आन्दोलनमा उत्रिने हिसान, प्याब्सन र एन प्याब्सनल चेतावनी दिएको छ । बम पड्काइएका र बम राखिएका विद्यालयहरुको स्थलगत अवलोकन गरेका तीनै संगठनका प्रमुखहरुले आज नै संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी विद्यालयमा बम आतंक फैल्याउने अर्थात यस घटनाका दोषीलाई कडा कारबाही ...
नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठक सम्पन्न
काठमाडौं, ४ असोज । नेकपा (माओवादी केन्द्र) केन्द्रीय कार्यालयको बैठक आज दाहालको निजी निवास लाजिम्पाटमा सम्पन्न भएको छ । बैठकले पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण उपलब्धिमूलक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकमा गत भदौ ३० देखि असोज २ गतेसम्मको प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणबारे कार्यालयका सदस्यहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेको प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिइन् । भ्रमणले दुई देशबीच ...
लागु औषधसहित एक जना पक्राउ
इन्द्रेणी संवाददाता वुटवल, ४ असोज । लागु औषधसहित बुटवलबाट प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । पाल्पा जुठापौवा–५ का ३३ वर्षे रेशम थापालाई नुफिन, फेनारगन र केरेजाक नामका अबैध लागु औषधसहित प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । सोमबार राति उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेका थापालाई लागु औषध ऐन अनुसार कारबाही हुने प्रहरीले बताएको छ ।
यादवले देखे संविधानमा प्वालैप्वाल
सोलुखुम्बु, ४ असोज । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रचण्ड सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रिया शुरु नगर्नुले सम्झौता कार्यान्वयनमा शंका पैदा भएको बताएका छन् । प्रचण्ड सरकारले संघीय गठबन्धनका माग संविधान संशोधनको माध्यमवाट पुरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकाले सरकार बाहिरै बसेर पनि समर्थन जनाएको अध्यक्ष यादवको भनाई छ । उनले संशोधनका लागि एमाले सहमत नभएको बेला अतिबादी सोच भएका नेताहरुको ...
पर्वतकी इन्दिरा भइन “व्युटिफुल उमन अफ बहराइन”
बहराइन, ४ असोज । बहाराइन कन्फिडेन्टलले आयोजना गरेको सुन्दरी प्रतियोगितामा नेपाली महिला उत्कृष्ट १० मा परेकी छन् । “व्युटिफुल उमन अफ बहराइन” नाम दिइएको प्रतियोगितामा पर्वतकी इन्दिरा क्षेत्री उत्कृष्ट १० मा छनोट भएकी हुन् । दोश्रो पटक आयोजना भएको प्रतियोगितामा बिभिन्न देशका महिलाहरुल े सहभागिता जनाएका थिए । करिब ९ वर्ष देखि बहराईनमा काम गर्दै आएकी इन्दिरा साहित्य समाज बहराइनको ...
पौरखमा बाँचना सिक्दै बाजुराका एक युवक
खिमु केसी बाजुरा, ४ असोज । बाजुरा जिल्ला डोगडी गाबिस वडा नं. १ भिडेतोला बस्ने नरबहादुर रावत एक साहसी तथा जागरिला युवक हुन् । आर्थिक हिसाबले अति बिपन्न परिवारमा जन्मेका नरबहादुरले जिवनका २१ औ बसन्त पार गरेका छन् । बुवाको कान्छो तथा अन्तिम सन्तानको रुपमा जन्मेका उनका २ वटा दाजुभाई छन् । उनको परिवारमा खेती कृषानी बाहेक आम्दानीको अन्य श्रोत ...
Page 30 of 106« First...1020«2829303132 » 405060...Last »